Faah Faahin:Kooxo Hubeysan oo 28 Qof Kenyaan ah Ku Dilay Weerar Ka Dhacay Duleedka Mandheera.
Saturday November 22, 2014 - 10:19:29 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya dhulka Soomaalida Kenya gumeysato ee Waqooyi Bari loo yaqaan ayaa sheegaya in weerar khasaara badan dhaliyay lagu qaaday gaari ay la socdeen Muwaadiniin Kenyaati ah.
Ilo wareedyo laga helay gudaha Kenya ayaa xaqiijinaya in xoogag hubeysan ay waaberigii saaka weerar ku qaadeen gaari bas ah oo ka amba baxay magaalada Mandheera kunasii jeeday dhanka magaalada Nairobi.
Hay’adda bisha Cas Kenya ayaa sheegtay in ragga weerarka geystay ay dadkii gaariga la socday kala sooceen oo wixii muslim ahaa ay sii daayeen halka wixii Nasaaro ahnaa ay dileen.
Dhimashada ayaa gaartay 28 qof halka warar kale ay sheegayaan in 32 qof ay dhimashadu gaarsiisantahay,xoogaga weerarka geystay ayaa gaariga ka leexsaday wadada laamiga ah iyagoona dadka Nasaarada ah ku laayay deegaanka Alcarabiya oo qiyaastii 35 KM ujira Mandheera.
Dadka Kenyaanka ah ee lalaayay ayaa isku diyaarinayay in ay ka qeyb galaan xafladaha ciid gaaleedka Kirismiska oo maalmo yar ka harsanyihiin,booliska ayaa weerarkan ku eedeeyay xarakada Shabaabul Mujaahidiin balse majiro wax war ah oo Shabaabul Mujaahidiin kasoo baxay.
Dhinaca kale mas'uul katirsan maamulka Mandheera ayaa warbaahinta uxaqiijiyay in 4 sarkaal oo booliska Kenya katirsan ay kamid ahaayeen dadka lagu dilay weerarka lagu qaaday gaariga Baska ah.